Kuboshwe 4 ngezokudayisela abafundi izidakamizwa eF State | News24
Kuboshwe 4 ngezokudayisela abafundi izidakamizwa eF State
Bloemfontein – Kuboshwe amadoda amane asolwa ngokudayise izingane zesikole izidakamizwa eBloemfontein, kusho amaphoyisa aseFree State.
"Imizi eseFreedon Square naseHeidedal yiyo okuthiwa idayisela abafundi izidakamizwa," kusho uConstable Peter Kareli.
OLUNYE UDABA: Izidakamizwa zidayiselwa izingane - Petros
Ngesikhathi amaphoyisa efika emzini oseFreedom Square, afice indoda eneminyak engu-38 ubudala ihlanganisa izijumba zensangu elinganiselwe emalini engu-R30 000 ngentengo yasemgwaqeni.
Komunye umuzi oseHeidedal kutholwe amaphakeshana ohlobo lwesidakamiswa seMethcathinone iKat ezilinganiselwe emalini engu-R500 kuwardrobe.
La madoda amane kulindeleke ukuthi avele eNkantolo yeMantshi yaseBloemfontein maduze.